၀၉:၀၁၊ ၂၂ ဧပြီ ၂၀၂၀ Khun lathar ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ တမ်းပလိတ်:!(/testcases ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (ပအုိဝ်း၉၉၉) စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
၀၈:၅၉၊ ၂၂ ဧပြီ ၂၀၂၀ Khun lathar ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ တမ်းပလိတ်:!(/sandbox ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (အဓိပ်ပါယ်နားမလည်) စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
၀၈:၅၈၊ ၂၂ ဧပြီ ၂၀၂၀ Khun lathar ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ တမ်းပလိတ်:!(/doc ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (စာေရးသည် ပအုိဝ်းဘာသာစကား) စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
၀၇:၃၆၊ ၂၂ ဧပြီ ၂၀၂၀ Khun lathar ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ ဆွေးနွေးချက်:ပအိုဝ်းလူမျိုး ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (ြမန်မာ့မာ့သမုိင်းရဲ့အခန်းေတာ်ေတာ်များများ ဟာစဥ်းစားစရာအြဖစ်ရှိေမတယ်) စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
၀၇:၃၁၊ ၂၂ ဧပြီ ၂၀၂၀ Khun lathar ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ ဆွေးနွေးချက်:မြန်မာ့သမိုင်း ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (မဏိစနန်ဒါသမုိင်းအေထာက်ထားရှာမရပါ) စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
၀၇:၂၉၊ ၂၂ ဧပြီ ၂၀၂၀ Khun lathar ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ ဆွေးနွေးချက်:သုဝဏ္ဏဘူမိ(သထုံ)မင်းဆက် ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (ငုိေအာင်လုပ်တာနှစ်တစ်ေထာင်ြပည့်လာြပီ) စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
၀၇:၂၀၊ ၂၂ ဧပြီ ၂၀၂၀ Khun lathar ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ ဆွေးနွေးချက်:မနုဟာမင်း ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (သမုိင်းေပျာက်တလွဲ) စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
၀၇:၀၉၊ ၂၂ ဧပြီ ၂၀၂၀ Khun lathar ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ ဆွေးနွေးချက်:မဏိစန္ဒာ ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (ပဲခူးလုိ့ေကျာက်စာအေထာက်ထားကုိရှာမရပာ) စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
၀၇:၀၇၊ ၂၂ ဧပြီ ၂၀၂၀ Khun lathar ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ ဆွေးနွေးချက်:ကျန်စစ်သား ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (အေထာက်ထားရှာမရလုိ့ပါ) စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
၀၆:၅၃၊ ၂၂ ဧပြီ ၂၀၂၀ Khun lathar ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ ဆွေးနွေးချက်:သထုံ မင်းဆက်များ ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (သမုိင်းကုိမလိမ်နဲ့) စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
၀၅:၂၅၊ ၂၂ ဧပြီ ၂၀၂၀ Khun lathar ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ အသုံးပြုသူ:Khun lathar ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (အမှန်ကန်ဆုံးသီအုိရီတစ်ခုရှာေဖွြခင်း) စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
၀၅:၂၁၊ ၂၂ ဧပြီ ၂၀၂၀ အသုံးပြုသူအကောင့် The east controller ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို Khun lathar ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကဖန်တီးခဲ့သည် စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
၀၅:၂၀၊ ၂၂ ဧပြီ ၂၀၂၀ အသုံးပြုသူအကောင့် ခွန်လသာ ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို Khun lathar ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကဖန်တီးခဲ့သည် စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
၂၃:၀၁၊ ၂၁ ဧပြီ ၂၀၂၀ အသုံးပြုသူအကောင့် Khun lathar ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို ဖန်တီးခဲ့သည် စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:မှတ်တမ်း/Khun_lathar" မှ ရယူရန်